Ronaldinho oo Filim cusub la soo wada aktarka caanka ah ee Jean-Claude Van Damme…(Waa maxay doorka uu filimka ku jilayo?)+SAWIRRO – Gool FM
Ronaldinho oo Filim cusub la soo wada aktarka caanka ah ee Jean-Claude Van Damme…(Waa maxay doorka uu filimka ku jilayo?)+SAWIRRO
Byare June 3, 2016
(America) 03 Juunyo 2016. Laacibkii hore ee Barcelona iyo AC Milan Ronaldinho ayaa dabayaaqada sanadkan ka soo muuqan doona Filim cusub uu la wado aktarka caanka ah ee Jean-Claude Van Damme.
Filimkan ayaa la magac baxay Kickboxer: Retaliation, waxa uu Ronaldinho ku jili doonaa dagaalyahan khabiir ah oo ku jira xabsi isagoona sida loo dagaalamo bari doona Alain Moussi, waxaana filimka loogu yeeri doonaa Ronaldinho magaca Ronaldo.
Filimkan ayaa ah qeybtii labaad ee filim uu 27-sano ka hor uu jilay Van Damme, laakiin doorkiisii qatarta ahaa ee filimkaas la jilay 1989 waxaa markan ka ciyaari doona Alain Moussi oo tababar fiican ka helaya Ronaldinho.
Ronaldinho oo kaliya kama soo muuqan doona filimkan dagaalka ah oo aadka u xiisaha badan leh oo waxaa kaloo ka soo muuqan doona magacyo waa wayn sida Mike Tyson, xiddiga UFC ee Fabricio Werdum iyo Paige VanZant.
Filimkan oo uu daaraktarka ka yahay Dimitri Logothetis ayaa lagu wadaa inaad daawan doontaan dhammaadka sanadkan.